War - Gogosha noocee ah ayey fududahay in la nadiifiyo?
Agabyo kala duwan iyo dhismooyin derbiyada sagxada gaariga ayaa leh qaabab dhaqid kala duwan.
Adkaanta maydhashada sidoo kale way ka duwan tahay, sariirta gawaarida hada si caadi ah ayey ula socdaan qalabkan kaladuwan: rooga, gogosha gawaarida caagga ah, gogosha gawaarida pvc iyo gogosha gawaarida ee TPE / TPR.
Aynu sharaxno waxa ay ku kala duwan yihiin habka dharka lagu dhaqo ee gogosha gaariga:
Roogga gaariga : dukaanka gawaarida badankood waxay ku siin doonaan rooga gaariga markii aad iibsaneysid, si fiican ayuu ula qabsan doonaa gawaarida, waxayna u egtahay qurux marka hore, laakiin dhowr bilood ka dib, wuxuu helayaa wasakh aad u badan, waana adag tahay in si cad loo nadiifiyo , biyuhu ma aha, oo waxaad u baahan tahay inaad sugto intay qallalan tahay inaad gaarigaaga dib ugu celiso, runtii ma sahlana in la sameeyo.
5D PVC Leather derin dabaqa gaariga caadadii, Waxay caan ku ahayd sannado, maxaa yeelay maqaarku wuxuu umuuqdaa gogosha baabuurta raaxada, Waxaa jecel milkiilayaasha baabuurta sanadihii la soo dhaafay.waa la jaray oo lagu tolay moodooyinka gawaarida, sidaas darteed sidoo kale waa ku habboon yahay gaariga oo wuxuu ku soo saari karaa MOQ hooseeya, waa kaliya lagu jarjaray mashiinka oo lagu tolay shaqaale, dhammaan warshadaha gogosha baabuurta ayaa soo saari kara dhammaan moodooyinka gawaarida. Laakiin gogosha baabuurka ee maqaarka ah ee loo yaqaan 'PVC skin' waa sahlan tahay in la bixiyo xoogaa ur ah sunta kuleylka ， wuuna kala bixi doonaa ka dib markii la dhaqo mararka qaarkood. Dad aad u yar ayaa adeegsada hadda.
Saqafyada gawaarida caagga ah, faa iidadiisa ugu weyni waa qiimaha jaban, waadna goyn kartaa si aad gaarigaaga ugu haboonaato, laakiin maaddadani deegaanka uma fiicna, ka dib marka aad isticmaasho bilaha qaarna way dillaaci doontaa, dheg dhegeyn doontaa, adkeyn doontaa, jilcin doontaa, booreyn doontaa, midab doorsoon, caarya, waxay umuuqataa mid wasakh badan. Marka ma soo jeedineyno inaad hadda isticmaashid sariirta sagxada gaariga.
Qalabka cusub ee ilaalinta deegaanka TPE, TPR waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa sagxadaha gaariga. Mana laha wax ur ah heerkulka sare, dib loo cusbooneysiin karo, ka-soo-noqoshada, lebiska u adkaysta, sifooyinka biyuhu xiraan. Sababtoo ah walxaha TPE uma baahna wakiil kasta oo wax lagu daro.
Gogosha baabuurta ee 'TPE' waa naqshad 3D ah, waxay leedahay culeys dusha sare ah oo hagaajin doona xoogga khilaafaadka isla markaana dhinacyada ku hareeraysan ee sare waxay ka hortagi karaan dheecaannada dhinaca dheecaanka ee biyaha, gaariga ka ilaalin gudaha Cilladaha darbiyada gaariga TPE waxay u baahan tahay in loo soo saaro caaryada baabuur kasta oo kala duwan, waxay qaadan doontaa waqti dheer kharash badanna in lagu horumariyo. Haddii aad ka heli karto gogosha baabuurta ee aad ugu baahan tahay alaabada TPE ee suuqa, ha ka waaban inaad dalbato, hubaal waad iibin doontaa mid aad u wanaagsan.
Iskusoo wada duuboo, gogosha baabuurta ee TPE iyo TPR way fududahay in la nadiifiyo oo waxay ku haboontahay qoysaska inay caruur leeyihiin, wax dhibaato ah uma leh caafimaadka.
Waqti ayaad kaydsan doontaa si aad u dhaqdo gogosha gaariga TPE, waxay u baahan tahay oo keliya 2 daqiiqo si aad u nadiifiso gebi ahaanba nadiif.
Gogosha gaariga TPE waa darbiyada gawaarida nadiifka ah ee ugu fudud.
Sida loo isticmaalo gawaarida sagxada gaarigaaga 20 haa ...